Ap1 Khabar | यसरी मनाउँदैछ कांँग्रेसले३९ औं वीपी स्मृति दिवस - Ap1 Khabar यसरी मनाउँदैछ कांँग्रेसले३९ औं वीपी स्मृति दिवस - Ap1 Khabar
यसरी मनाउँदैछ कांँग्रेसले३९ औं वीपी स्मृति दिवस
ए.पी. वन खबर २०७८ श्रावण ६, बुधबार ०८:४५
वीपी कोइराला अर्थात् विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला । नेपाली राजनीतिक इतिहासले कहिल्यै भुल्न नसक्ने नाम ।
वीपीको नामबाटै शुरु हुन्छ नेपाली राजनीतिको परिवर्तनको चरण । उनै नेपाली कांँग्रेसका संस्थापक नेता एवं नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वीपीको ३९ औं स्मृति दिवस पार्टी तथा उसका भ्रातृ संगठनले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदै आएका छन् ।
यसपालि पनि नेपाली कांँग्रेस र उसका भ्रातृ संगठनले वीपीलाई साउन ६ गतेको अवसर पारेर सम्झिदै छन् । बीपीको २०३९ साउन ६ गते निधन भएको थियो । बीपी २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा कांँग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएपछि पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
तर दुई वर्ष काम गर्न नपाउँदै तात्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित संसद् अपदस्त गरेपछि उनले लामो समय निर्वासन र जेलमा बिताउनुपरेको थियो ।
वीपीको मेलमिलापको नीतिबारे काँग्रेस मात्र होइन कम्युनिष्टहरुले पनि सान्दर्भिक भन्दै आएका छन् । पार्टीहरुबीच मेल नभइ देश विकास हुन्न भन्ने थाहा भए पनि अवसरका लागि जुट्ने र अन्य बेलामा आपसमा द्धन्द्ध बढाइरहने परम्परा यद्यपि छ ।
अर्थात् वीपीलाई हरेक दलले सम्झने गर्छन् । जतिबेला एकताका लागि पहल भइरहन्छ त्यतिबेला सबै दलले वीपीको नाम उच्चारण गरेरै एकताको प्रयास थाल्ने गरेका छन् । त्यसबाहेक वीपीको आदर्श र समाजवादको नीतिलाई अहिलेको कांँग्रेस नेतृत्वले समेत भुल्दै गएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, वीपीले एउटा युगलाई परिवर्तन गर्नुभयो । उहाँले जुन क्रान्ति गर्नुभयो उहाँको आन्दोलनमा अहिले पनि हामी लडिरहेका छौं ।’ उनी अहिलेको नेतृत्वले वीपीको आदर्शलाई भुल्दै गएको आरोप लगाउँछन् ।
वीपी त्यस्ता नेता हुन् जसका कुनै पनि खोँट कसैले देखेका छैनन् । कसैले पनि उनको अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णयमा आलोचना गरेका छैनन् । अर्थात् उनी दूरदर्शी नेता थिए भन्ने प्रमाण पनि हो ।
साहित्यकारसमेत रहेका वीपीको यौनमनोवादप्रति ठूलाठूला साहित्यकार पनि नतमस्तक हुने गरेका छन् ।
के गर्दैछ कांँग्रेसले वीपी स्मृति दिवसमा ?
सत्तामा रहेको नेपाली कांँग्रेसले बुधबार ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम गर्दैछ । कांग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार कांँग्रेसका ७७ वटै जिल्ला कार्यालयको आयोजनामा वीपी स्मृति दिवस मनाइँदैछ ।
र्याली, सभा, गोष्ठीदेखि लिएर वृक्षारोपण लगायतका कार्यक्रमहरु गरिन लागेको हो । यता, काठमाडौंमा केन्द्रीय प्रचारप्रसार विभागले गर्ने कार्यक्रममा सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि सहभागी हुने पौडेलले बताए ।